बेचैन बनाउने त्यो असारे घटना
अहिले नेपाल बन्द भन्ने शब्द सामान्य जस्तै भइसकेको छ। सडकमा चलिरहेका गाडी तोडफोड गर्ने र बजार बन्द गराउँने काम बन्दका पर्यायवाची हुन्। तर त्यतिबेलाको परिस्स्थिति बेग्लै थियो। नेपाल बन्दको समयमा विद्यालय खुलाएमा शिक्षकले कुटाइ खानुपर्ने र विद्यार्थी लडाइँमा होमिनुपर्ने स्थिति थियो। त्यो ठ्याक्कै कुन दिने हो?, याद त छ
‘ओइ पुजा, पुजा उठ त्, डाँडामाथि घाम आइसकेयो कति सुत्छेस के,’ ह्या आमा पनि कति कराइरह्नुहुन्छ, सुत्न पनि नदिने! ‘तँलाई बदमास, घरमाथि घाम आइन्जेल सुतेर पनि अझे सुत्न नदिने भन्छेस्?’ सधै बिहान ५ बजे उठेर क्याम्पस गएको त हो नि,अब पढाई नहुँदा नि सुत्न नदिन
बूढानीलकण्ठको विष्णुद्वार र डाँडागाउँ पुगे जेसुम यात्रीहरू
विहानको उज्यालो घर्किँदै थियो तर काठमाडौको मौसम फरासिलो थिएन। शिवपुरी जङ्गलको छेउमा अवस्थित बूढानीलकण्ठ उसै त शीतल ठाउँ, झन् बादलले ढाकेपछि त हप्प रिसाइरहेझैं देखिन्थ्यो पहाड।मौसमको धुमिलतालाई जेसुम यात्राका जाँगरिला तन्नेरीले चुनौति दिए सिर्जनामा र त मौसमले पानी पारेन।बरू सिर्जनाको रसले भिज्यो बूढानीलकण्ठको पहाड।
विधवा भएर समाजमा बाँच्नुको पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ
माइतिको आँगन छोडेर नयाँ जीवन सुरूवात गर्न म मेरो श्रीमानको घरमा भित्रिए। दुबैजनाको कुनै व्यवसाय थिएन। कृषि र पढाइलाई अगाडि बढाउँदै थियौं। बिहे भएको ३ महिना पुगेको अर्को रात एक्कासी ९, १० जनाको समूह हाम्रो घरमाआएर भने,‘देशको लागि लड्न पार्टीमा भूमिगत
प्रचण्ड–सीता प्लेन संवाद
मनोसंवाद ‘म घरमै झोक्राएर बसिरहेको थिएँ। लावालस्करसहित उहाँ साइरन बजाउँदै आएको थाहा पाएँ। ढोका त गेटपालेले खोलिसकेको थियो। उ
म निर्मला पन्त!
हो म त्यहीँ निर्मला पन्त जो बलाकृत भएपछि कञ्चनपुरको एउटा उखुबारीमा फालिएकी थिएँ। साथीको घरबाट गृहकार्य सकेर घर फर्कँदै थिएँ, पछाडिबाट कोही मसँग नजिकिन खोजेको थाहा पाएँ। जब थाहा पाएँ मेरा आँखा कालो पट्टीले छोपिसकेका थिए। कता जाने? म कता छु? कसलाई भन्ने? अब के हुन्छ? उसले मेरो कपडा फुकाल्न जबर्जस्ति गर
हरेक दिन कोठाबाट बाहिर निस्कँदा होस् वा भित्र पस्दा भित्तामा टाँसेको त्यही ठूलो फ्रेममा गएर आँखा अडिन्छ। ‘बेस्ट फोटो अफ द ईयर.’..अनि सँगै टाँसिएको अवार्ड पनि। यो फोटोग्राफर मेरो पेशा हुँदै होइन। कहाँको डाक्टर बन्न हिँडेको मान्छे आधा डाक्टर आधा फोटोग्र